Akụkọ - T -SHIRT
T-shirt, ma ọ bụ uwe elu tee, bụ ụdị akwa akwa akpọrọ aha T na ahụ ya na aka ya. Na omenala, ọ nwere aka uwe dị mkpụmkpụ na eriri olu gburugburu, nke a maara dị ka olu ndị ọrụ, nke na -enweghị olu. A na-ejikarị t-shirts eme ihe na-agbatị agbatị, dị mfe ma dịkwa ọnụ ala ma dịkwa mfe nhicha. T-uwe ahụ sitere na uwe ime eji eme ihe na narị afọ nke 19 na, n'etiti narị afọ nke 20, gbanwere site na uwe ime gaa na uwe nkịtị.
A na -ejikarị akwa owu eme ya na stockinette ma ọ bụ jersey, ọ nwere udidi na -adịkarị mfe ma e jiri ya tụnyere uwe elu ejiri akwa kpaa. Ụfọdụ nsụgharị nke ọgbara ọhụrụ nwere ahụ nke ejiri ọkpọ na -ejikọ ọnụ mgbe niile, nke a na -emepụta na igwe na -akpa okirikiri, nke mere na toso enweghị akụkụ n'akụkụ ya. Nrụpụta T-shirts abụrụla nke na-akpaghị aka nke ukwuu yana ọ nwere ike ịgụnye ịcha akwa na laser ma ọ bụ ụgbọ mmiri.
T-shirts dị ọnụ ala n'ụzọ akụ na ụba na-abụkarị akụkụ nke ejiji ngwa ngwa, na-eduga n'ịre ahịa T-shirts dị oke ọnụ ma e jiri ya tụnyere uwe ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, a na-ere T-shirts ijeri abụọ kwa afọ na United States, ma ọ bụ onye nkịtị si Sweden na-azụta T-shirts itoolu kwa afọ. dị ka owu nke bụ ma ọgwụ ahụhụ ma mmiri kpụ ọkụ n'ọnụ.
T-uwe elu V nwere olu nwere ụdị V, na-emegide n'olu olu nke uwe elu olu ndị ọrụ nkịtị (nke a na-akpọkwa U-neck). Ewepụtara V-olu ka uwe elu ahụ ghara igosi mgbe a na-eyi ya n'okpuru uwe elu, dị ka nke uwe elu olu.
Dị ka ọ na-adị, T-uwe elu, nke nwere akwa 200GSM, yana ihe mejupụtara ya bụ 60% owu na 40% polyester, ụdị akwa a na-ewu ewu na ntụsara ahụ, ọtụtụ ndị ahịa na-ahọrọ ụdị .Of N'ezie, ụfọdụ ndị ahịa na-ahọrọ ịhọrọ ụdị ọzọ nke akwa, na ụdị nbipụta dị iche iche na ịkpa ihe.